Kylian Mbappe Oo Jebiyay Rikoor Uu Horay U Dhigay Lione Messi.
HomeWararka CiyaarahaKylian Mbappe oo Jebiyay Rikoor uu horay u dhigay Lione Messi.
March 11, 2021 Wararka Ciyaaraha 0
Kylian Mbappé ayaa ah ciyaaryahanka ugu da’da yar ee 25 gool ka dhaliya Champions League ka dib shaqo joojin uu ka sameeyay Barcelona kulankii xalay kadib markii uu dhaliyey Rigoore lagu galay Icardi isagoona gool u bedelay bilowgii ciyaarta.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ayaa sameeyay taariikhda Champions League arbacadii isagoo rigoore loo dhigay Labadii kulan ee uu wajahay Barcelona, wareega 16ka taas oo celcelis ahaan ku dhamaatay 5-2 wadar ahaan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa kaalinta koowaad ka galay 31 daqiiqo ka dib markii uu jebiyey rikoorkii Lionel Messi inuu yahay ciyaaryahanka ugu da’da yar ee gaara 25 gool tartanka, isagoo jira 22 sano iyo 80 maalmood.
Ka dib seddexleey lugtii hore ee bishii hore, Mbappe ayaa haatan afar gool ka dhaliyay Barça xilli ciyaareedkan – waana ciyaaryahanka ugu badan ee abid ka dhaliyay kooxda reer Catalan hal xilli ciyaareed oo tartan ah goolal.
Messi ayaa baajiyay goolkii Mbappe wax yar ka dib isagoo dadaal cajiib ah ka helay meel fog, isagoo goolashiisa Champions League ka dhaliyay meel ka baxsan aagga diilinta 19aad.
Tan iyo markii ugu horeysay ee uu ka soo muuqday tartankii bishii Diseembar 2004, kaliya Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolal badan oo kala duwan oo tartankan ah (20).